Kuisa mari: chii chaunofanira kuita kana musika wemasheya uchidzika? | Ehupfumi Zvemari
Kuisa mari: chii chaunofanira kuita kana musika wemasheya uchidzika?
Sezvo hafu yekutanga yegore yave kuda kupera, inguva yakanaka yekufunga kuti chii chingaitika kana kubva nhasi zvichienda mberi mari muzvikwereti yakatambura kudzikama kwakakomba. Icho chiitiko chisiri kure kwazvo kubva kuchokwadi mumaonero evamwe vaongorori vemusika wemari. Kunyanya kana a kuderera kukuru kupfuura zvinotarisirwa muhupfumi hwenyika yekare. Uye vese zvavo mushure menguva yekutanga yegore vanozogadziriswa neyakaenzana mumisika yemari inofanirwa kuverengerwa seyakanaka zvine mwero.
Zvakanaka, isu tichaenda kukupa iwe akateedzana matipi kuitira kuti iko kutya kwekudonha mumisika yemari ikazoitika. Zvekuti nenzira iyi, iwe uri muchimiro chakakwana che chengetedza zvinhu zvako pachako kana mhuri. Nekuti haugone kukanganwa kuti kana izvi zvikaitika kubva ikozvino zvichienda mberi, pachave nemaeuros mazhinji anogona kukusiya iwe munzira mukushanda kwemusika wemasheya. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira ino inogona kuitika iyo inogona kubuda panguva isingatarisirwe nevashambadzi vadiki nepakati. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi mumatanda uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha zvavo.
Chimwe chezvinhu zvako zvakakosha kubva ikozvino kuenda mberi kutarisira mafambiro ane chisimba aya pamisika yemari yepasi rose. Kunyangwe nemukana chaiwo uyo zvakare mune ino yakaipa mamiriro ezvinhu iwe unogona monetize mari pamwe nekugona kukuru mukushanda. Uchiri kune rimwe divi, haufanire kuzorora mushure mekuita kwemisika yemari mukati mehafu yekutanga yegore. Inogona kunge iri mirage inosiya vazhinji vano saver vakasungirirwa, kunyanya avo vasina ruzivo rwakanyanya mukuhaya yekutengesa pasi.
1 Kuisa mari: kusarudza matura anodzivirira
2 Enda kumamwe misika
3 Kuparadzanisa kudyara
4 Sarudza anoshanda manejimendi
5 Zvirinani mvura tsika
6 Kushanda kwemusika
Kuisa mari: kusarudza matura anodzivirira
Imwe yedzakanakisa nzira dzekudyara kuti uzvidzivirire kubva kumhando idzi dzezviitiko mumisika yezvemari kubvumirana hunhu hunodzivirira hunhu kana kuchengetedza. Iko mune zviitiko zvakashata kwazvo ivo vanogona kukudziridza hunhu huri nani pane kune vamwe vese. Izvi zvakaitika muchikamu chekupedzisira chegore chandinopedza nevamiriri vemakambani ari muchikamu chemagetsi. Nepo indekisi inosarudzika yemari yenyika yakawana kuderera kwakakosha, hunhu hwechikamu chebhizinesi ichi chakakoshesa madhijitari maviri.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti aya marudzi emakambani akanyorwa vanogovera chikamu chinokwezva kwazvo pakati pevashambadziri uye avo vari pakati pekumiririra vari pakati pe5% ne7%, ichiva imwe yepamusoro-soro mumakambani emunyika. Pamusoro peaya anogadzirwa nezvimwe zvigadzirwa zvebhangi, senge maakaundi ane mari yepamusoro, nguva yekuisa kana manotsi ekuvimbisa emakambani. Chero zvazvingaitika, inoita zano rine simba rekugadzira kana kukudziridza yakatarwa mari yemari mukati meiyo musiyano. Kugadzira bhegi rekuchengetedza rakadzikama repakati nepakati.
Enda kumamwe misika
Iko hakuna kupokana kuti mhinduro yakanakisa yekuita pundutso inochengetedza munguva dzekusagadzikana mumisika yemari inoenderana nekondirakiti yezvimwe zvigadzirwa. Kuti muzviitiko zvese ivo vanokwanisa kuzviita zvirinani kupfuura pamusika wemasheya, sezvakagara zvichiitika nezvimwe zve zvipuka zvinonyanya kukosha sezvazvakaita nenyaya yegoridhe. Kune rimwe divi, iyo haigone kuenda isingazivikanwe panguva ino iyo yeyero simbi inoratidza yakanakisa yehunyanzvi chimiro sezvo ichifamba kuburikidza yakanyatso tsanangurwa-kumusoro uptrend.
Imwe imwe mari yemari inogona kunge iri oiri kana mitengo yayo ikaramba iri pasi penzira yazvino yekutenga parizvino. Mune ino kesi, hakuzove nesarudzo kunze kwekuenda kumisika yepasi rose kwazvakanyorwa, kunyanya United States. Kunyangwe kune izvi iwe unofanirwa kutakura mamwe makomisheni ayo ari echokwadi akawedzera kupfuura eenyika. Asi chichava kuvhiya kuchanyatso kukoshesa nekuti purofiti inogona kuwanikwa inonyanya kupa mubayiro. Kunyanya kana mitengo yavo ikapfuura nhanho yemadhora makumi manomwe neshanu dhiramu.
Imwe yemasisitimu ekudyara iwe aunogona kushandisa kuti ubve mune ino trance mumisika yemari ndeyokusiyanisa mari dzako kuburikidza nezvinhu zvakasiyana zvemari. Panzvimbo pekuisa mari yako yese mudengu rimwe chete, zvinokurudzirwa kuti iwe govera mune zvakasiyana zvemari zvigadzirwa: mari yekudyara, kutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya uyezve mune yakatarwa-temu bhangi dhipoziti. Nenzira iyi, iwe unenge uchinge uchichengetedza nzvimbo dzako mumisika yemari. Uye mune yakaipisisa kesi, hapana mubvunzo kuti iwe uchaganhurira izvo zvinogona kurasikirwa izvo zvaunogona kugadzira kubva zvino zvichienda mberi.
Uye zvakare, inzira inoshanda kwazvo yekuti iwe udzivise mamiriro ezvinhu akaomarara zvakanyanya kune zvaunofarira. Iko kungangoitika mamiriro ekuti iwe unorasikirwa nemari yakawanda mune imwechete chengetedzo kana stock chigadzirwa. Izvo zvakakosha kwazvo kugovera iro rinowanikwa capital mumabhasikiti akati wandei ayo anobatsira kuita kuti bharanzi yekupedzisira mune yako investa ive yakanaka chaizvo. Izvo zviri kumagumo ezuva chimwe chezvinangwa zvako zvakakosha apo kutarisana chero mhando mari. Kubatanidza, kana zvichibvira, zviyero nemari yakatarwa kana kunyangwe nemamwe mafomati, sezvinoita varimi vane ruzivo rwakawanda mumhando iyi yemamiriro.
Sarudza anoshanda manejimendi
Kushanda manejimendi munyika yemari inogara ichipa mibairo yakanaka kwazvo munguva dzekusagadzikana kukuru mumisika yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinozivikanwa chinja kune chero mhando mamiriro mumisika yemari. Kunyangwe mune isingafadzi zvakanyanya kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Pamusoro pemhedzisiro inongopihwa iwe nemari yekushandira mari
Nepo kune rumwe rutivi, inoshanda manejimendi inobatsira kune kuvandudza zvinhu zvemari zvinoenderana nekushanduka kwavo. Iri izano iro vazhinji vanoponesa vanokanganwa nekuda kwekushayikwa kwezano uye izvo zvinogona kuvatungamira kune akaomesesa mamiriro mune aya mamiriro asina kunaka. Iri izano iro rinoshandiswa zvakanyanya mumari yekudyara, zvese kubva kune yakatarwa uye inoshanduka mari. Iko kusina mari yemari inorambwa, asi akanakisa anosarudzwa nguva dzese.
Zvirinani mvura tsika
Imwe sisitimu isingambokundikana mune idzi kesi ndeyekusarudza chigadzirwa kana kuchengetedzeka zvinopa kugona kukuru. Nechinangwa chikuru chekuti iwe unogona kubva panzvimbo dzako munguva dzakaipisisa dzemisika yemari. Saka kuti nenzira iyi, haugone kubatwa munzvimbo dzepamberi dzinogona kukubhadharira mari yakawanda kuti ubude mazviri. Izvo zvakare zvakakosha kuti usarudze iyi yekudyara modhi iyo ichave iri nyore kwazvo kushandisa uye pasina chero imwezve mari. Kune rimwe divi, zvinokubatsira iwe kuve nekugona kwe zvirinani kugadzirisa mitengo yekutengesa mukushanda pamisika yemari.
Mune iyi pfungwa, hapana mubvunzo kuti iwe unofanirwa dzivisa zvivharo zvidiki vanogara vachikupa dambudziko rakawanda kupinda nekubuda munzvimbo dzavo. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kuita kuti iwe urasikirwe nemari nenzira isina basa zvachose, sezvakamboitika pane dzimwe nguva munhoroondo yako semushambadzi. Neimwe mhedzisiro isingadiwe kumaakaundi ako ega.
Iyo yakamisikidzwa yemari yemusika yakachengetedza yakakwira nhanho yechiitiko. Iko iyo huwandu hwakazara huwandu Mugore iro rakakura ne77,9%, mushure mekutengesa 28.750 mamirioni euros mumwedzi wapfuura, 85,3% yakakwira kupfuura munaKukadzi 2018. Pamusoro pezvo, nyaya dzakabvumidzwa mukutengesa dzakawedzera ne7,8% kubvira kutanga kwegore uye bhalansi yakakwira yakawedzera 2,9% . Panyaya yemusika wekutora zvemari, kutengesa kwakawedzera ne3,9% mumwedzi miviri yekutanga yegore zvichienzaniswa nenguva imwechete yegore ra2018. Kuwedzera uku kwakanangidzirwa kunguva yemberi yemari, iyo yakanyoresa kufambiswa kwe314,6%. Kunyange zvakadaro, kutengesa muIbex sarudzo kwakakwira 14,8% mumwedzi.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti nzvimbo yakavhurika yezvinhu zvese zvemari zvakawedzera ne7% zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura. Iko kuwedzera kukuru kwakanyoreswa mune ramangwana uye sarudzo paIbex 35, pamwe nekuwedzera kwe6,8% uye 16,5%, zvichiteerana. Ipo iyo ramangwana uye sarudzo pamasheya zvakare dzakakura. Mune zviitiko izvi, 3,1% uye 6,6% mune yega yega mafomati ekudyara. Kusimbisa kufarira kune chikamu chevashambadzi vadiki nepakati mumisika yequity. Mune dzimwe nguva senge dzazvino uno iko kuti purofiti yemari yakatarwa iri pazasi enhoroondo. Nemhedzisiro pamitengo yemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuisa mari: chii chaunofanira kuita kana musika wemasheya uchidzika?
Iko kudyara kuchave kwakaita sei mu2019?
Sarudzo dzinoita sei pamusika wekuSpain?